Vamwe - Absolut Viajes | Kufamba Absolut (Peji 2)
Nzvimbo dzekufamba wega
Kune nzvimbo dzekufamba chete pamakondinendi mashanu. Isu tinokurudzira nzvimbo senge Vietnam, Peru, New Zealand, Canada kana Kenya.
Chii chekuona muSenegal
Kana iwe uchinetseka kuti chii chekuona muSenegal, iwe unofanirwa kuziva kuti ndiyo imwe yenyika dzakanakisa uye dzinogamuchira muWest Africa yose.
Sri Lanka, inozivikanwa seMisodzi yeIndia, inokupa inoyevedza nharaunda, mahombekombe anoshamisa uye zvivakwa zvekare.
Maguta akanaka kwazvo muEurope
Akanaka maguta muEurope anokupa yakawanda nhoroondo, kunoshamisa zviyeuchidzo kuona uye mapaki akanaka kunakidzwa.
Chii chaunofanira kutarisa kukwereta imba yekumaruwa ine garandi
Iwe unoziva zvaunofanira kutarisa kukwereta imba yekumaruwa ine garandi? Pano tinopa mamwe emazano makuru aunofanirwa kutevedzera mune idzi kesi.
Nzendo dzeMediterranean dzinokubvumira kuti uzive maguta makuru ekumaodzanyemba kweEurope nezvose zvawo zvekuchera matongo uye zvakakura zvishamiso.
Zvinhu zvekuita muMaldives
Kana iwe uchinetseka kuti chii chekuita muMaldives, isu tinokuudza kuti ine zvivakwa uye zvakasiyana gastronomy, asi pamusoro pezvose zvinonakidza zvakasikwa runako.
Kana iwe uchinetseka kuti chii chekuona muLapland, isu tinokuudza iwe kuti une anoshamisa ekuchamhembe magetsi, asi zvakare kurota nharaunda uye kunyangwe imba yaSanta Claus.
Kufunga nezve idzo nzendo dzekufamba muchato? Zvakanaka ikozvino iwe unogona zvakare kuronga yako. Pano tinokuudza iwe sei uye neruzivo rwese rwunodiwa.
Kuenda kuBali muIndonesia kuziva nyika yakasiyana zvakanyanya neyedu. Asi zvakare shanyira nzvimbo yeyakanaka hunhu uye akasarudzika mamaki.
Tsika uye tsika dzevaMasais
Iwe unoda kutsvaga zvishoma nezvetsika uye tsika dzevaMasais? Ruzivo rwakakosha kwazvo rwunotitaurira mararamiro avo.
Bruges yeBelgium ine inoshamisa nhoroondo nhoroondo iyo iri World Heritage Saiti uye ine yakasarudzika zvivakwa pasi.
Helsinki iguta rizere nenhoroondo, zvivakwa uye mamuseum. Asi zvakare negastronomy iri tastier kupfuura iwe zvaunotarisira.
Krakow nderimwe remaguta akanaka kwazvo muEurope. Iwe uchawana mukati maro mupfumi wakakura kwazvo nhaka, yakanakisa gastronomy uye inogamuchira vanhu.
Uye chii chandinoita nekutiza kwangu? Dambudziko repasirese
Kuuya kwecoronavirus pachiitiko kwakashandura pasi rese kukomberedza. Dzimwe nyika dzakapasa kana kunyudzwa mu ...
Kunyangwe paine chokwadi chekuti ndege ichiri nzira dzinoshandiswa zvakanyanya dzekufambisa neruzhinji rwevanhu, iyo ...
Mahotera ekuenda nevana
Iwe unoziva hunhu hwese uye ndeapi mahotera akafanana kuenda nevana? Pano tinokuratidza kuti upedze zvakanakisa zororo remhuri
Hunhu hwemahotera asina vana
Kune akawanda maitiro emahotera asina vana aunofanirwa kuziva. Iwe unoda here kunakidzwa nekuenda wega uri vaviri kana neshamwari?
Iwo maYellow Mapeji achiri chirevo chehurumende chekutsvaga kwekugamuchira vaeni uye nyanzvi dzerudzi chero rupi zvarwo, kubva kuna vanachiremba vemazino ...
Kana iwe uchida kuroja karavhani iwe unofanirwa kufunga nhevedzano yematanho ekutanga, kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka uye iwe ugone kunakidzwa nezororo rako.
Nzvimbo dzakachipa dzekufamba muEurope
Uri kufunga kuenda kuzororo uye haudi kushandisa yakawanda? Nyora pasi idzi dzakachipa nzvimbo dzekufamba muEurope uye unakirwe nekuzorora kwako.
Kupona kit parwendo rwako: Izvo zvausingakwanise kupotsa
Iwe unoda kufamba here uye iwe hauzive kwekutangira sutukesi yako? Tarisa uone kit yedu yekupona parwendo rwako uye usasiya chero chinhu kumba.
Yemusango uye isina kunyoroveswa, Komodo National Park yeIndonesia iparadhiso inozivikanwa nekuvapo kweguru rakakura kwazvo pasirese.
Maitiro ekudzivisa kubiridzirwa kana uchihaya imba
Iwe unofanirwa kudzivirira kunyengerwa kana uchihaya furati yezororo rako rezhizha. Naizvozvo, hapana chakafanana nekutevera akateedzana matipi akareruka atinofunga
Kufamba nendege nevana
Kufamba nendege nevana kunogona kunetsa kupfuura isu zvatinofunga. Asi isu tinogona kugara tichiisa mukuteedzera akateerana ekutanga matipi.
Chii chinonzi couch surfing
Couchsurfing yave imwe yenzira dzinobatsira kwazvo dzekufamba. Tsvaga kuti chii uye kuti inoshanda sei mukuwedzera kune ayo makuru mabhenefiti.
Kuronga zororo remhuri hakusi nyore nguva dzose. Nekudaro, isu tinopa nhevedzano yematanho ekutora. Zvakareruka uye zvinoshanda!
Kana iwe ukashanyira Lake Bled muSlovenia iwe unowana iyo yemashiripiti uye yepasirese nyika yakakodzera iyo yakanakisa yeEuropean ingano.
Inishuwarenzi yemhuri yekufambisa inogara iri sarudzo yakanaka. Tichawana rugare rwepfungwa nekutenda kune zvazvakanakira muchimiro chekuvhara.
Chii chekuona kuVictoria Falls
Kana iwe uri kutsvaga kuti uzvirasire iwe mune chimwe chezvishamiso zvakasikwa zvepasirese, iyo Victoria Falls inova inonakidza kwazvo kuwanikwa.
Kushanyira tembere dzeAngkor muCambodia zvinoreva kupinda mune imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo pasi. Vazvizive!
Kana iwe wanga uchinetseka kuti chii chekuona muSofia, tinokuunzira akateedzana emakona nenzvimbo dzakakosha dzaunofanira kushanyira parwendo urwu rwusingakanganwike.
Nzvimbo dzekuenda kunodakadza
Kune dzakawanda nzvimbo dzekuenda kurudo rwunogona kusarudza kubva. Isu tasarudza iwo aunogona kushanyira pane inokurumidza getaway.
Zvakanakira kubhuka rwendo pamberi
Pane zvakawanda zvakanakira kubhuka rwendo pamberi uye kuti iwe unofanirwa kuziva. Iwe uchaona kuti nenzira iyi iwe unogona kunakidzwa nezororo rako zvakanyanya.
Zvakakosha here kutora rwendo rwekunze inishuwarenzi?
Izvo zvakakosha here kubhadhara rwendo kukanzura inishuwarenzi? Nhasi tinokupa iwe mhinduro uye isu tinokuudza iwe kuti ndeyei uye ndeipi kufukidza kwairi.
Chii chaungaona muDinant, Belgium
Nhasi tinotora kufamba kukuru kuburikidza neinonzi 'Mwanasikana weMosa' kana kuti anozivikanwa saDinant. Tsvaga zvekuona muDinant, Belgium, uye makona ayo akanaka.
Usapotsa kufamba uku pane zvaunofanira kuona muWarsaw. Iwe uchanakidzwa nemakona emashiripiti, ayo anokuendesa iwe kune yayo nhoroondo uye tsika.
Kuala Lumpur Petronas Towers: Kubva kumatenga eMalaysia
Iyo Petronas Towers muKuala Lumpur haisi imwe chete yemifananidzo huru yeMalaysia asi kukunda kweAsia kunotsigirwa netsika uye nehunyanzvi.
Zvirongwa zvevhiki senge vaviri
Kubva pachikamu chepa spa kusvika pakurasika mumaguta anoyevedza, izvi zvirongwa zvevhiki senge vaviri vachakundisa iwe. Wakazviita zvese here?
Mhenderekedzo dzakanakisa muThailand
Kusarudzwa kwemahombekombe akanakisa muThailand, kwaunoshandisa mazuva nemanheru akanakisa ekugara kwako. Kupiwa kwakakura kune zvese zvido.
Kwokufamba muna Gumiguru
Tsvaga kwekuenda kwaOctober. Nzvimbo dzakanaka, dzine tembiricha yakanaka uye zvinhu zvakawanda zvekutsvaga. Usafunge kaviri!
Mekong Delta: zasi kuburikidza nenzvimbo dzinopisa dzeVietnam
Miti yekokonati, yakakura minda yemupunga kana misha yakatenderera inomirira muMekong Delta iyo inomutsa mashiripiti uye exoticism yeVietnam. Iwe unoda kuzviziva here?
Ndege dzisiri kuenda, dzinoshanda sei?
Isu tinoratidza zvakanakira nendege dzisiri kuenda, panguva imwechete yatinokuudza mashandiro avo uye nekwaunogona kuwana chibvumirano chakadai.
Maitiro ekuti uwane rezinesi rekutyaira repasi rese
Kana iwe uri kufunga nezvekuti ungawana sei rezinesi rekutyaira repasi rese, tinokuratidza matanho aunofanirwa kutora, pamwe nemagwaro nemutengo wawo.
Mutambo weZigaro Mamepu
Isu tinoongorora dzimwe dzinonyanya kukosha nzvimbo muMutambo weZigaro. Nzvimbo dzakasarudzika dzatakaona mune dzakateedzana.
Maitiro ekuvandudza pasipoti
Tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuvandudza pasipoti yako. Kubva kupi kuzviita, zvinyorwa zvekupa uye mutengo wekubhadhara.
Bran Castle kana Dracula's castle ndiyo imwe yemvumo yekumira muRomania. Nzvimbo ine yakawanda runako uye ngano shure kwayo.
Usapotsa iyi sarudzo yenzvimbo dzekufamba munaGunyana izvo zvichakushamisa iwe. Iwe unozowana dzakasarudzika nzvimbo dzekunakidzwa nemwedzi iwoyo!
Zvikonzero zvekufamba usina masutukezi
Kufamba usina masutukesi rave zano rakakura. Kana iwe usati wagutsikana, tsvaga zvakanakira zvakanaka uye zvikonzero zverwendo runonakidza.
Kwamunoona Mwenje wekuchamhembe
Kana iwe uchida kuziva kwekuona maNyanga ekuchamhembe, tinokusiya iwe neakanakisa mapoinzi kwaunogona kunakirwa neiyi yakanaka yechisikigo.
Tembere dzeAyutthaya ndeimwe yadzo nzendo dzakakosha kuti unakirwe neNhoroondo yePaki iyo izere netembere, dzimbahwe uye zvivezwa zvinopenya uye zvinorondedzera dzimwe nguva. Kana iwe ukaronga kushanyira Thailand, saka haugone kukanganwa nezvenzvimbo ino.
Kana iwe ukaenda kune imwe nyika: Kutenderera kana kubhadharira SIM kubva munyika yaunoshanyira?
Zvichida iwo mubvunzo unomutsa kusahadzika kwakawanda. Dzese dzinofamba kana kubhadharira SIM sarudzo mbiri paunenge uchienda parwendo uye uchikwanisa kuve nekubatana neinternet. Nhasi tinoona zvakanakisa uye zvakaipisisa pane zvese sarudzo kuti iwe ugone kusarudza pane yakachipa uye iyo inonyatsokodzera iwe.
Mafomu uye zvishandiso izvo zvisingakwanise kushayikwa kubva kune yako nhare kana iwe uchienda parwendo
Isu tinoongorora maapplication uye zvishongedzo izvo zvinoda nharembozha yedu patinoenda parwendo. Nzira yekutakura zvese zvaunoda kuti uve asina hanya, uye tinogona kunakidzwa nemazuva iwayo ekuzorora kwakakodzera. Tsvaga zvaunoda kuti uzviite!
Kana kwaunotevera kuenda kuri kuFiji Islands, tiri kuenda kukupa iwe ruzivo rwese rwaunoda kuti uite rwendo irworwo rwusingakanganwiki. Kubva pane zvekuita muzvitsuwa izvi, kumitengo uye idhata idzi dzekufarira dzatinoda zvakanyanya. Tiri kurongedza here?
Tanna, chitsuwa chisinganzwisisike muPacific Ocean
Tanna iri muPacific Ocean. Icho chimwe chezvitsuwa zvakawanda zvinoumba chitsuwa cheVanuatu. Asi pasina kupokana, iye ane hukuru hukuru hwekutsvaga. Ndezve chitsuwa chisinganzwisisike icho Jules Verne akatiudza panguva iyoyo. Unoda kupinda mariri here?
Chii chandingaunza mu ruoko mukwende?
Kana tisingade kumirira mitsara mirefu kuti titarise mukati, mukwende wemaoko unova mubatsiri wedu wakanyanya. Asi hongu, isu tinofanirwa kugara tichizvizivisa pachedu nezve izvo zvatinogona kutakura uye izvo zvatisingatakure. Saka, nhasi tinojekesa kusava nechokwadi kwese uko kunotambudza musoro wako.
Isu tinokuratidza mamwe emahombekombe akanakisa pasirese uko iwe kwaunogona kuwana yakasarudzika uye yemashiripiti nharaunda, yakakomberedzwa nemasikirwo uyezve, yakawanda runako. Wakambove mune imwe yevavo vatataura? Ivo vanofanirwa kunakidzwa kamwechete muhupenyu.
Isu tinotora kufamba kuburikidza neimwe yemarenje anozivikanwa pane iyo hombe skrini. Wadi Rum yaive marongero emamuvhi akaita sa "Lawrence weArabia" uye anovanza zvakavanzika zvakawanda uye zvido zvinokodzera kurarama, kamwe chete muhupenyu.
Kufamba mahara semuzvipiri
Tsvaga kuti ungafamba sei mahara sevazvipiri pasirese. Chiitiko chinopfumisa kwazvo iwe neramangwana rako.
Tsvaga Leuven: Musanganiswa wetsika, tsika uye hupenyu hwakawanda. MaNook uye zviyeuchidzo zvizere nerunako zvaunogona kuona pane kupukunyuka.
Wieliczka Munyu Wemunyu
Tsvaga migodhi yemunyu inozivikanwawo seyechechi yepasi pasi yemunyu. Ivo vari muguta rePoland reWieliczka.
Usapotsa pane zvaunofanira kuona muBratislava. Guta guru reSlovakia rine makona mazhinji ekuratidzira uko hunyanzvi hunosangana nengano uye nhoroondo.
Maitiro ekuronga kutenderera pasirese
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuronga rwendo kutenderera pasirese, usapotsa akanakisa matipi egadziriro atinokusiira iwe nhasi.
Matipi ekufamba zvakachipa
Tinokusiyira iwo akanakisa matipi ekufamba zvakachipa. Nhanho diki dzekufunga nezvadzo kana tichida kuchengetedza zvakawanda kupfuura zvatingafungidzira.
Chii chekuona muMalta
Usapotsa pane zvaunofanira kuona muMalta. Rwendo rwezvitsuwa zvaro zvikuru, pamwe nemaguta ayo azere neakakura mapurani uye tsika tsika
Nhungamiro yevanodzokera kumashure muThailand
Kana iwe ukafamba semubhegi kuenda kuThailand usarasikirwa negwara redu kwatinokudzidzisa iwe zvekuunza, mafambiro, shanduko yemari uye mamwe manomano
Sal Island, muCape Verde: iyo tsika yeNo Stress
Chitsuwa cheSal, muCape Verde, iparadhiso yakashambidzwa neimwe yemahombekombe akanaka kwazvo muAfrica uye inogarwa nevanhu vane ushamwari uye vanogamuchira vaeni.
Misiyano pakati pemahotera emadhorobha nekumaruwa
Avo vasingazive kuti kushanya kwekumaruwa kunowanzo shamisika kuti mutsauko uripi pakati pekugara kwekumaruwa ...